पत्नी गुमाएको पाँच नपुग्दै जेठो छोरालाई अनि आफै ७४ वर्षीय बुवालाई रुहाउदै गए थापा::Nepal's Online News Portal
पत्नी गुमाएको पाँच नपुग्दै जेठो छोरालाई अनि आफै ७४ वर्षीय बुवालाई रुहाउदै गए थापा
काठमाडौँः त्रिवि शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक विभाग अगाडि न्युरो सर्जन डा. बालकृष्ण थापाको हुलियासहितको विवरण बुझाउँदै गर्दा भाइ रामकृष्ण पटक–पटक भक्कानिए । घरमा रुद्री पूजा गरेर बंगलादेशको राजधानी ढाका गएका डा. थापा स्वदेश फर्किएपछि भूकम्पमा भत्केको काभ्रेस्थित घर बनाउने योजनामा थिए, अब उनको त्यो योजना सदाका लागि अधुरै रह्यो ।
युएस बंगला एयरलाइन्सको विमानबाट सोमबार स्वदेश फर्कंदै गरेका थापाको त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको दुर्घटनामा निधन भयो । आँसु पुछ्दै दाजुको हुलिया विवरण भर्दै गरेका ४६ वर्षीय थापालाई डिएसपी आर थापाले सहयोग गरिरहेका थिए । दाजुभाइबीच चार वर्ष मात्र फरक भएका कारण उनीहरु साथीझैं व्यवहार गर्थे ।
थापाले दाजुको स्वभाव सरल भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘घरपरिवार, साथीभाइ, विरामी सबैसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । सबैको प्रिय हुनुहुन्थ्यो। ’ थापाको असामयिक मृत्यु भएको खबरले विरामीसँगै चिकित्सकहरु पनि स्तब्ध भएका छन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डीन प्रा.डा जगदीश प्रसाद अग्रवालले भने,‘ स्तब्ध भएको छुँ । प्रतिभावान न्युरो सर्जन गुमाउनु पर्यो‍ ।’
चिकित्सा क्षेत्रको उज्वल नक्षत्र अस्ताएपछि उनका सहकर्मी, शिक्षक र विद्यार्थी समेत शोकाकुल छन् । थापाका ७४ वर्षीय बुवा शोकमा डुबेका छन् । पत्नी गुमाएको पाँच वर्षपछि उनले जेठो छोरालाई पनि गुमाउनु पर्यो‍ ।
सधैँ अब्बल बालकृष्ण
मध्यम परिवारमा काभ्रेको कुशादेवी–३ मा २०२४ साल माघमा जन्मिएका थापा सानैदेखि मेधावी थिए । कुशादेवी माध्यमिक विद्यालयका हरेक कक्षामा उनी सधैँ प्रथम भइरहे । एसएलसीमा ७४ प्रतिशत ल्याएर प्रथम श्रेणीमै उत्तीर्ण गरेका थिए । सरकारी छात्रवृत्तिमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानबाट उनले एमबीबीएस गरे । उनी एमबीबीएसमा पनि नेपाल प्रथम भए । भाइ रामकृष्णले भने, ‘पढाईमा तीक्ष्ण हुनुहुन्थ्यो । एमबीबीएसमा आठ गोल्ड मेडल पाउनुभएको थियो ।’
‘थापाका ७४ वर्षीय बुवा शोकमा डुबेका छन् । पत्नी गुमाएको पाँच वर्षपछि उनले जेठो छोरालाई पनि गुमाउनु पर्यो‍’
थापाले बंगलादेशबाट न्युरोमा एमएस गरेका थिए । उनी चिकित्सक संघका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष र नेपाल न्युरो सर्जन समाजका महासचिव पनि हुन् । उनको पछिल्लो कार्यक्षेत्र राजधानी बाहिर थियो । भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा वरिष्ठ न्युरो सर्जनका रुपमा उनी कार्यरत थिए ।
साहित्यप्रेमी थापाले कवितासंग्रह समेत प्रकाशन गरेका छन् । उनका एक भाइ र बहिनी छन् । छोरा संघर्ष र छोरी इरादा अष्ट्रेलियामा छन् । दुवैजना बुधबार काठमाडौं आउने तयारीमा छन् । पति गुमाएसँगै पत्नी सुमित्रा शोकमा डुबेकी छिन् ।